Deg Deg Wiilka u dhalay Jamal Kashogi o Beniyay in Lacag ay ka helen dawlada Sucuudiga | Biyoguurenews.com
Home Wararka Deg Deg Wiilka u dhalay Jamal Kashogi o Beniyay in Lacag...
Deg Deg Wiilka u dhalay Jamal Kashogi o Beniyay in Lacag ay ka helen dawlada Sucuudiga
Saalax Khaashuqji ayaa sheegay inuu “kalsooni buuxda ku qabo” hanaanka cadaaladda Sacuudiga, wuxuuna weeraray mucaaradka oo uu sheegay inay ka faa’iideysanayaan kiiskan.
“Sanad ayaa kasoo wareegtay geeridii aabahay aan jeclaa. Muddadan, mucaaradka iyo cadowga Bariga iyo Galbeedka waxay isku dayeen inay ka faa’iideystaan kiiska…si ay u waxyeeleeyaan dalkeyga iyo hoggaanka” ayuu ku yiri tweet.
“Ma aqbali doono in xusuustiisa iyo kiiska laga faa’iideysto” ayuu yiri Saalax oo deggan Sacuudiga.
“Aad ayaan ugu kalsoonahay hannaanka cadaaladda boqortooyada iyo awoodda ay uleedahay inay cadaaladda mariso kuwii fuliyey dambigan aadka u xun” ayuu yiri.
Wargeyska Washington Post ayaa 1-dii April weriyey in caruurta Khaashuqji, oo uu Saalax ku jiro la siiyey guryo malaayiin dollar ku fadhiya, islamarkaana ay mas’uuliyiinta u qoreen kumanaan dollar bil walba.
Previous articleDanjire xusen cali ducale, Araga Siyaad bare waxa Iigu Horaysay, Sheekadan ayana na dhex martay,
Next articleBerbera, Wasiiro Xukuumada ka Tirsan o jawaab Adag Siiyay Madaxada xisbiga wadani